इजरायल खुल्यो, मासिक तलव नै १ लाख ७० हजार भन्दा माथि (यसरी दिनुहोस् आवेदन) ? – Paluwa Khabar
साउन ९, २०७८ शनिबार 96
सूचनामा काम गर्ने समय, कामदारको योग्यता, तलब र इजलायलको कानुनी व्यवस्थाबारेमा जानकारी राखिनेछ भने परीक्षा अंग्रेजी भाषामा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसपछि अन्तर्वार्ता लिएर अन्तिम योग्यता सूची तयार गर्ने र उक्त सूची इजरायलको पीआईबीएलाई पठाउने र विभागले पठाएको सूचीका आधारमा पीआईबीएले अन्तिम उम्मेदवार छनोट गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यसपछि भिसा प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीचको सम्झौताको आधारमा स्याहार केन्द्रमा एक हजार नेपाली कामदार माग भएको छ ।
कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा माँनिदै आएको छ । अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारको करारनामामा हस्ताक्षर गरी इजरायलले विभागमा पठाउने छ ।
विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर श्रमिकलाई इजरायल पठाउनेछ । न्यूनतम मासिक १५ सय डलर ९ एक लाख ७८ हजार नेपाली रूपियाँ० पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
सरकारी तहमा लैजाने भनेर सम्झौता भए पनि कामदार इजरायल जान पाएका थिएनन् । तीन वर्ष अघि एक सयको हाराहारीमा कामदार गए पनि थप कामदार जान पाएका छैनन् । ****** पुरा समाचार हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevयी चर्चित कलाकार लाई अचानक के भयो यस्ताे ?
Nextबिजय शाहीले कती तमासा देखाको ? बिजयको अंग्रेजी र फर्मुलाको खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो सहित)
कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने सम्बन्धमा आयो यस्तो खबर (सुचना सहित)
माओवादीका हजाराैँ कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गर्दै (नामावाली सहित) ,हेर्नुहोस्